Zinara Archives - What's On In Harare
Harare News 26 April 2021
Source: Devolution funds: Chitungwiza buys refuse trucks – NewsDay Zimbabwe BY TAFADZWA KACHIKO Chitungwiza Municipality has puchased two refuse trucks and two ambulances from the $32 million devolution funds it received from government recently. Mayor Lovemore Maiko told NewsDay yesterday that the refuse trucks and ambulances, purchased from Croco Motors and Dulys, respectively, would be delivered mid-June. […]
The post Devolution funds: Chitungwiza buys refuse trucks appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 25 March 2021
Source: Hand over vehicle licensing to councils: Zinara told – NewsDay Zimbabwe BY MIRIAM MANGWAYA Combined Harare Residents Association (CHRA) has written to the Zimbabwe National Road Administration (Zinara) to hand over vehicle licensing responsibilities to local authorities to enhance transparency and accountability. CHRA alleges that Zinara is failing to disburse licensing fees towards road […]
The post Hand over vehicle licensing to councils: Zinara told appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …